Automotive - Jiangxi Prototek Imp&Exp Co., Ltd.
Raadinta dib-u-cusboonaynta tartamayaasha iyo dhimista kharashyada dhinac kasta oo horumarinta alaabada waa ganacsi sida caadiga ah warshadaha baabuurta. Baahidaan waxaa ku adag arrimo ay ka mid yihiin xeerarka deegaanka oo adag, kor u kaca qiimaha alaabta ceeriin, iyo baahida socota ee lagu dhimayo wakhtiga suuqa la galaayo. Prototek waxay leedahay waayo-aragnimo aan la qiyaasi karin oo ku saabsan wax ka qabashada caqabadaha warshadaha baabuurta. Qalabkeena, software-ka iyo xalalka adeegyadayada waxay ka caawinayaan shirkadaha inay horumariyaan qaybo miisaan fudud si ay hoos ugu dhigaan kharashaadka wax soo saarka, naqshadeynta iyo soo saarista shirar cusub oo yareeya tirada qayb ka mid ah oo bixiya xoog iyo hufnaan weyn, abuurna noocyo macquul ah oo ka saari kara bilaha habka horumarinta alaabta.
Prototek waxay la shaqaysaa soosaarayaasha baabuurta, baabuurta iyo shirkadaha qaybaha si ay u fududeeyaan silsiladooda sahayda oo ay si firfircoon u cabbiraan awoodooda wax soo saar. Shirkadaha baabuurta korantada hormuudka ka ah iyo kuwa iskood u bilaabay waditaanka ayaa sidoo kale la shaqaynaya Prototek.
Codsiyada Gawaarida Caadiga ah
Prototek wuxuu ku faanaa inuu u adeego shirkado kala duwan oo ka tirsan warshadaha baabuurta. Adeegyadayagu waxa ay naga dhigeen hormuudka alaab-qeybiyeyaasha baabuurta ee dalka iyo adduunka oo dhan. Bixi qaybo baabuur oo tayo leh:
ulaha & Qaybaha
Adeegga Cnc ee jaban, Qaybaha Spindle-ka, Cnc Soo Saaraha Qaybaha Rogsaday, Qaybaha Cnc ee Iibka, Alaabta Cnc, Qaybaha Saxda ah ee Cnc,